ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု. Show all posts
ဩစတြေးလျ ပင်လယ်နက်ထဲ တွေ့ရတဲ့ မျက်နှာမရှိတဲ့ ငါး
မေ ၃၁ – အရင် ကတစ်ခါ မှမစူးစမ်း ဖူးတဲ့ သမုဒ္ဒရာရဲ့အပိုင်း တွေကို လေ့လာတဲ့ ဩစတြေးလျ ရေနက်ပိုင်း စူးစမ်း လေ့လာရေး အဖွဲ့ဟာ မျက်နှာ မပါတဲ့ ငါးနဲ့ တခြား ထူးဆန်းတဲ့ ရေနေ သတ္တဝါတွေ၊ မျိုးစိတ် သစ်တွေကို တွေ့ရှိခဲ့ ပါတယ်။
နိုင်ငံ့ အရှေ့ပိုင်း ရေနက်ပိုင်း ထဲကို တစ်လကြာ ရှာဖွေမှုမှာ မျက် နှာပြင်အောက် လေးကီလို မီတာနက်တဲ့ မည်းမှောင် အေးစက်တဲ့ အသူတရာ နက် ချောက် ထဲ ကို ပိုက်ကွန်၊ ဆိုနာနဲ့ ပင်လယ်နက်ပိုင်း ကင်မရာတွေကို သုံးပြီး လေ့လာ ခဲ့ပါတယ်။
The Investigator သင်္ဘောပေါ် သိပ္ဗံပညာရှင်ချုပ် တင်အိုဟာရာက အခုရှာဖွေတဲ့ နေရာဟာ ကမ္ဘာမှာ လုံးဝမရှာဖွေ ရသေးတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် တည်ရှိ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အနီတောက်တောက် ကျောက်ကဏန်းတွေ၊ ဖောသွပ်သွပ် ခေါင်းတလားငါး၊ မျက်ကန်းပင်လယ်ပင့်ကူတွေနဲ့ ပင်လယ်ရေ နက်ပိုင်းငါးရှဥ့်တွေဟာ မေ ၁၅ က စတင်တဲ့ စူးစမ်းလေ့လာမှုမှာ တွေ့ရှိခဲ့တာတွေဖြစ်ပါတယ်
သူတို့ဟာထူးခြားတဲ့ မျက်နှာမဲ့ ငါးတစ်မျိုးကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ဒီငါးကို ၁၈၇၃ ခုနှစ်က ပါပူဝါနယူးဂီနီမှာတစ်ကြိမ်သာတွေ့ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒီငါးမှာ မျက်လုံးနဲ့ နှာခေါင်းမပါဘူး၊ ပါးစပ်ကအောက်ဘက် မှာရှိတယ်လို့ အိုဟာရာက သင်္ဘောပေါ်ကပြောပါတယ်။
အဲသည်လောက်ရေနက်တဲ့နေရာမှ မှောင်လွန်းတဲ့အတွက် သတ္တဝါတွေဟာ မျက်လုံးမပါတာ၊ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အလင်းရောင် ဖြာထွက်တာတွေ ရှိကြ တယ်လို့ သူကဆက်ပြောပါတယ်။
[ref: AFP, May 31, 2017.]
From : ကုမုဒြာဂျာနယ် by စုပြည့်စုံ
ကဏ္ဍ နိုင်ငံတကာသတင်း, ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု